Bitcoin Debit Card Ukuqhathanisa 2018 - Bitcoin Credit Card
TOP Bitcoin Debit Card – a Crypto lwemali Ikhadi Ukuqhathanisa
Bitcoin imali ye-inthanethi – futhi nge Bitcoin Credit Card, ungakwazi ukukhokha kuphi emhlabeni wonke lapho Credit- noma debit Cards zamukelwa ne lwemali Crypto ozikhethele. Kanye Bitcoin Wallet, ungakwazi ukushintsha mayelana 95% wonke amasevisi iBhange evamile zingakhiqiza kuwe.
Nge umehluko omkhulu ukuthi une ukulawula inani phezu imali yakho esele futhi akekho omunye umuntu. Lona ikusasa ezezimali. Jabulela inkululeko. Uma unemibuzo mayelana ukuthenga Bitcoin Card, qinisekisa ukuhlola yethu “Indlela ukukhetha” Umhlahlandlela below.
Spectrocoin Bitcoin Card – Ubuhle nobubi
+ Wonke amazwe emhlabeni wonke kuhlanganisiwe
+ Izinhlelo ze etholakalayo abasebenzisi Windows mobile kakhulu
+ ikhadi Inkampani iyatholakala
– lokuthumela ezibizayo
– umbiko Umkhonyovu futhi izikhalazo
– Kulahleke ulwazi kusuka website
ikhadi engaziwa: Yebo
ikhadi plastic: Yebo
ikhadi elibonakalayo: Yebo
ikhadi Inani: plastic $9.00/€ 8.00 / £ 6.00 – Virtual $0.50/€ 0.50 / £ 0.50
zezimali: USD, EUR, GBP
Okwenziwayo Foreign Imali: 3%
Iyalayisha Imali: Mahhala
Imali yangenyanga: $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
Cryptopay Bitcoin Card – Ubuhle nobubi
+ zezimali ezinkulu ezintathu (EUR, GBP, USD) konke ogunyaziwe
+ Mahhala lokuthumela emhlabeni wonke
+ Iwebhusayithi yakhelwe kahle futhi kulula ukuyisebenzisa
– izakhamuzi EU kuphela
– amanani Ephakeme
– imali yokuhweba Foreign
ikhadi Inani: plastic 15 € / £ / $ – Virtual 2.50 € / £ / $
zezimali: EUR, GBP, USD
Iyalayisha Imali: 1%
Imali yangenyanga: $1
WageCan Bitcoin Card – Ubuhle nobubi
+ Ungazitholela yona emazweni amaningi kubandakanya USA
+ Abasunguli ngesizinda eqinile zobuchwepheshe
+ Iyatholakala nge-USD, EUR, GBP
+ uhlelo Ibhonasi
– Imali ikhadi ezibizayo
– Imininingwane kunzima ukuthola kuwebhusayithi
– Ikhadi eshibhile iphelelwe isitokwe
ikhadi engaziwa: Ayikho
ikhadi Inani: Kusukela 0.025 BTC
AdvCash Bitcoin Card – Ubuhle nobubi
+ Ayikho imali yesondlo nyangazonke
+ RUB njengohlobo lwemali etholakalayo
+ Mahhala top up kusuka SWIFT / SEPA ukudluliselwa, isilinganiso esiphansi ukudluliselwa
– Azikho izinhlelo zokusebenza ezitholakalayo
– EU Amazwe asekelwe
– Alukho ulwazi ebunikazini isakhiwo noma abaphathi
– imikhawulo Daily on ukuthenga kubasebenzisi ngisho eliqinisekisiwe
ikhadi Inani: plastic $/€ 4.99 (14.99 ngemuva 7 izinsuku) – Virtual 1 + 0.99 $/€ uxhaso
zezimali: EUR, GBP, USD, RUB
Okwenziwayo Foreign Imali: 2.95%
Iyalayisha Imali: $/€ 0.99 ngakunye
Imali yangenyanga: Mahhala
CoinsBank Bitcoin Card – Ubuhle nobubi
+ Zonke-in-one mfihlo umhlinzeki nge isikhwama, exchange futhi bitcoin debit card
+ Eceleni ezinkulu Fiat zezimali USD, EUR, GBP, ikhadi itholakala RUB, CHF, AUD, zezimali JPY kakhulu futhi kunike litecoin akhawunti kakhulu
+ Abaningi ikhadi amathuba ngokusekelwe ezingeni yokuqinisekisa
– ubunikazi Inxanxathela hhayi obala futhi izakhiwo eqinile
– Ukuthumela kwamahhala itholakala kuphela kubasebenzisi premium
– Izimali High isicelo POS kanye ATM
ikhadi Inani: plastic kusukela $14.95 – Virtual kusukela $2.95
zezimali: EUR, GBP, USD, RUB, CHF, AUD
Okwenziwayo Foreign Imali: Kusukela 2.5%
Imali yangenyanga: $0.95-$2.95
Uquid Bitcoin Card – Ubuhle nobubi
+ Iyatholakala nge-USD, EUR, GBP and 40 altcoins ezahlukene eceleni bitcoin
+ Unlimited esaphila ukuthenga ATM Ukuzihoxisa
+ Abaningi ukulayisha ongakhetha
– IsiZulu Kubi isetshenziswa kuwebhusayithi yabo
– Ayitholakali izakhamizi US
– fresh inkampani
ikhadi Inani: Plasitc $1 – Virtual $1
zezimali: USD, EUR, GBP and 40 altcoins ezahlukene
Iyalayisha Imali: 1.5% – 5%
Xapo Bitcoin Card – Ubuhle nobubi
+ ezingeni eziphakeme zokulondeka
+ isakhiwo dolobha Namandla
+ Ayikho imali phezulu kuze
– Okungaqinisekisiwe umsebenzisi babe komkhawulo nakuyi-Internet futhi POS
– Xapo isekela Segwit2X
– izakhamuzi US ayifakiwe
ikhadi elibonakalayo: Ayikho
ikhadi Inani: plastic $20 / € 18 / £ 13
Iyiphi indlela engcono kakhulu Bitcoin Ikhadi mina?
Indlela ukukhetha kwesokudla Bitcoin Ikhadi umhlinzeki?
Kukhona izinkampani eziningi futhi uqale ups ukuhlinzeka debit card bitcoin kulezizinsuku njengoba cryptocurrencies kuyanda ezingasho.
Kukhona ezinye amaphuzu ukuthi wanna-kufanele Bitcoin lasebhange wekhadi kungase kudingeke ufune lapho sifuna umhlinzeki engcono. I abahlinzeki ikhadi ukudalula iningi lolu lwazi kwamanye amasayithi, ngakho konke kuthatha nje ngalo ukulifunda lonke ngokucophelela. Thola ulwazi zangokwasemuva zezinhlelo inkampani ikhadi wezitifiketi.
Inhloso emva bitcoin kanye ileja blockchain zomphakathi Ukungathembani. Ngakho bitcoin lasebhange abanikazi bamakhadi bezikhungo ngokuvamile osolisayo ezingaphezu kuka amakhasimende kwezinye izimboni. Ngakho-ke abahlinzeki kufanele ukukholisa amaklayenti abo esizayo ukuthi ahlinzeke Legit, amasevisi athembekile.
Ngokuvamile abahlinzeki ngamasevisi okungaphezu nje ikhadi. Wonke umuntu isikhwama, kodwa isibonelo Spectrocoin, Cryptopay, CoinsBank, Xapo zonke ukusebenzisa bitcoin zabo Ukuhwebelana kokunika amandla oqondile bitcoin ngokuthenga nge kumawebhusayithi wabo. Kungenjalo umsebenzisi kufanele ifa cryptocurrencies ngaphambi kulayishwa ukuba ezithintekile bitcoin debit card.
AdvCash ikhadi bitcoin lasebhange ine Fiat zezimali ezintathu ezinkulu njengo-USD, EUR futhi GBP zamukelwa yibo bonke abahlinzeki. RUB iyona lwemali naphambili ezivamile, abasebenzisi Russian inganquma AdvCash bitcoin debit card lapho akhawunti anikezwe RUB.
amakhadi Plastic futhi virtual kukhona emakethe. I amakhadi epulasitiki ingasetshenziswa kokubili ATM Ukuzihoxisa nokuthenga inthanethi, amakhadi virtual ingasetshenziswa kuphela kuyi-Internet. It kuwufanele kokuhlola ngaphambi kokungena ngemvume ukuthi umhlinzeki ukhipha amakhadi epulasitiki noma kuphela inketho virtual lutholakala.
Ngezinye eziningi bitcoin umhlinzeki debit card, abasebenzisi zingasebenzisa amasevisi ngisho ngaphandle siqu zokuqinisekisa, lanxa Limites ezithile ezisetshenzisiwe. Lezi imikhawulo zibandakanya nsuku zonke, imikhawulo nyangazonke nempilo ku cash Ukuzihoxisa noma POS ukuthenga. Kungenjalo inqubo yokuqinisekisa kwenziwa kokuthumela ubufakazi lobunikazi uhlobo ikhadi likazwelonke le-ID kanye nobufakazi yokuhlala okungaba bill Umbuso kusukela esikhathini esidlule 3 izinyanga kweziningi amacala. Isikhathi esidingekayo ukuze kuqinisekiswe ziyahlukahluka okuningi, kusukela kwamahora ambalwa ukuze ngisho 10 izinsuku.
Bitcoin Debit Card, ongakhetha kuwo?
Ngenxa imithetho kanye nabasebenzisi umthetho udaba e-United States bayakhishwa kusukela kumasevisi, ngaphandle CoinsBank alinikela amasevisi elinganiselwe ku-US izakhamizi.
Nokuthunyelwa plastic amanani ikhadi yakhiwe kwamanye izimali, ngakho lokuthumela evamile ngokuvamile khulula, abahlinzeki amacala mayelana 45-70 USD okufinyeziwe ukulethwa inketho.
Iningi abahlinzeki unezinhlelo zokusebenza smartphone atholakale qinisekisa ukuthi abasebenzisi ukulawula izimali zabo kusukela smartphone. Ngokuvamile iOS kanye Android izinhlelo zokusebenza zinikezwa, kodwa i-Windows abasebenzisi ifoni kungase kudingeke ukucinga eminye, njengoba itholakala kuphela Spectrocoin amaklayenti.
Ikhadi zentengo Okwenziwayo Izimali
Imibhalo yokuqala kuyi ikhadi Izimali ezikhokhwayo ezisukela 5 USD kuya 20 USD nge-avareji ka 10 USD. Ezinye inikeza amakhadi ebonakalayo kuphela, kodwa ukuthi izindleko kuphela 0.5 USD.
Ngezinye abanye abahlinzeki ukuba angasebenzi ikhadi bangajeziswa kodwa abaningi ukushaja imali eyengeziwe ngokuba ngasebenzi. abasebenzisi Akusebenzi are ones kungukuthi kokwenza ngisho nakanye eminyakeni emibili nge ikhadi.
Amaklayenti kungaba kulayishwa ikhadi wire ukudluliselwa noma SEPA ukudluliselwa imali emhlabeni 0.5%-1%. Abanye abanikezeli osebenza amazinga flat, ngakho amaklayenti kufanele sinake inombolo kanye nenani izimali idluliselwe ku-akhawunti isikhwama ekhadini lasebhange. Kukhona ukhetho ukulayisha bese ethula nge okunye abahlinzeki yokukhokha ezifana Skrill, Neteller noma PayPal. Ezinye amakhadi bitcoin lasebhange, Nokho nentengo ingaphezu kwe wire ukudluliselwa, kungaba njalo 1% ukuze 5% ngamunye ukuthengiselana.
I abahlinzeki bitcoin lasebhange kuthiwa inzuzo lapho umsebenzisi kokwenza nge ikhadi. Nakuba nokuthenga inthanethi ngokuvamile khulula, kodwa abanye may umangalela imali ngalolo kakhulu. ATM njalo icala ngakolunye uhlangothi. The ezifuywayo cash Ukuzihoxisa wonke 2-3 USD, the Ukuzihoxisa ngamazwe kukhona 3-4 USD, kungenzeka ukuthi isilinganiso esiphansi sisetshenziswa eceleni amaphesenti. Uma ukuthenga noma ukuhoxiswa lwemali ihlukile kune lwemali ezizenzakalelayo akhawunti bonke abahlinzeki ukhokhisa i extra lwemali exchange rate ye 3%.
Iklayenti Impendulo Umuzwa womsebenzisi
service enhle uqala ngekhasi ezinhle lokubikezela. Kufanele kucace ukuthi kuyinto inkonzo futhi kubiza malini. Amaklayenti sebenzisa website ukuthola ulwazi olufanele mayelana amasevisi anikezwa. Eceleni imenyu isakhiwo esicacile kanye FAQ; abahlinzeki kuzomele sifake ukusebenza yosesho ngaphakathi it. Ukwaneliseka ikhasimende kakhulu kuye ezisekelweni olunikezwa bitcoin lasebhange issuers, ezifana Ticket uhlelo, I-hotline wengxoxo bukhoma.
Kunezindlela eziningi umhlinzeki bitcoin ikhadi banganikeza iklayenti yayo. The best bitcoin lasebhange umhlinzeki luncike ethize izidingo yomsebenzisi.
Bitcoin Ikhadi Ukuqhathanisa